Xildhibaan kusoo biiri doona Golaha Shacabka oo berri lagu dooran doono Baydhaba – Kalfadhi
Xildhibaan kusoo biiri doona Golaha Shacabka oo berri lagu dooran doono Baydhaba
Kursi ka banaan Golaha Shacabka, oo ay deegaan-doorashadiisu tahay Koofur Galbeed Soomaaliya (KGS) ayaa lagu wadaa in doorashadiisa berri lagu qabto magaalada Baydhaba ee Xarunta Ku-meel-gaarka u ah Dowlad Goboleedka KGS.
Kusigaas ka banaan Golaha Shacabka waxaa 27-kii Abriil, 2018-kii baneeyey, Allaha u naxariistee, Marxuum Khaliif Sh. Cabdullaahi (Dheere) oo, kadib muddo uu ku xanuunsanaa Muqdisho, ku geeriyooday isbitaal ku yaala caasimadda, waxaana ay Guddiga Doorashooyinka Qaranka u diiwaan-geliyeen ugu yaraan 4 musharrax iney u tartami doonto xilkaas.
Xogtan waxa uu Kalfadhi ka helay Xubno ka tirsan Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya (BJFS), oo magacyada musharraxiinta u tartami doonta kursigaas ugu sheegay:-
1) Isaaq Khaliif Sheekh
2) Cabdulqaadir Sh. Maxamed Nuur
3) Xasan Macalin Ibraahim iyo
4) Cabdullaahi Sh. Maxamed
Qabya-tirka Dastuurka Qaranka oo la dalbanayo inuusan dib uga dhicin sanadkan